थाहा खबर: मेसीमाथि करियरकै ठूलो दबाब, सफल होलान् कि असफल ?
एजेन्सी : मेसी बार्सिलोनाका लागि कुद्छन्। समर्थकहरु मेसीसँगै क्लबको सफलता कुरेर बस्छन्। सन् २००८ मा बार्सिलोनाले स्टार फुटबलर रोनाल्डिन्होलाई एसी मिलानमा बेचेपछि (अथवा कतिपयका अनुसार त्यसभन्दा अघि पनि) मेसी यस क्लबका केन्द्रीय पात्र रहँदै आएका छन्।
मंगलबार राती मेसीले फेरि एकपटक आफ्नो जादुयी प्रदर्शन देखाए। उनकै २ गोलको सहयोगमा बार्सिलोनाले इटलीको महारथी क्लब युभेन्टस्लाई च्याम्पियन्स लिगमा ३–० को नमिठो हार चखायो।
बार्सिलोनाबाट खेल्ने क्रममा मेसीले अहिलेसम्म ५ सय ८९ खेलमा ५ सय १५ गोल गरेका छन् भने २ सय ३१ एसिस्ट उपलब्ध गराइसकेका छन्। आफ्नो देश अर्जेन्टिनाका लागि उनले १ सय २० खेलमा ५८ गोल गरेका छन्।
अर्थात मेसीको प्रदर्शन लोभलाग्दो छ। तर उनीबारेका तथ्यहरु जति सुन्दर छन्, त्योभन्दा धेरै चुनौतीपूर्ण र रोमान्चक हुनेछ, उनको यस सिजनको यात्रा।
मेसीले डरलाग्दा चुनौतीहरु सामना गर्नेछन्। बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैं अहिलेसम्मको प्रदर्शन हेर्दा उनी त्यसका लागि तयार देखिएका छन्।
मेसीले यस सिजन बार्सिलोनाबाट सुरुआती ६ खेलमा ८ गोल गरेका छन्। जसमा ला–लिगाका ३ खेलमा गरेको ५ गोल र च्याम्पियन्स लिगको १ खेलमा गरेको २ गोल समावेश छ।
मेसीको दिर्घकालीन करियरमा यो क्यालेन्डर सिजनको अर्थ महत्वपूर्ण हुनेछ। त्यो बार्सिलोनाका लागि अर्थपूर्ण हुनेछ। अर्जेन्टिनाका लागि अर्थपूर्ण हुनेछ।
आफ्नो पुस्ताका सबैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडी मानिएका (कतिले फुटबल इतिहासकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी मानेका) मेसीेलाई यस वर्ष विगतमा जस्तो स्टार खेलाडीहरुको साथ हुनेछैन। न अर्जेन्टिनामा मेसीलाई यस्तो साथ हुनेछ। न बार्सिलोनामा हुनेछ।
तर बितेका वर्षहरुभन्दा धेरै उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने दायित्व उनको काँधमा छ किनकी मेसी अर्जेन्टिनाका कप्तान (लिडर) हुन्। कप्तान नभएपनि बार्सिलोनाका लिडर हुन्।
बार्सिलोनाले यसअघि २ पटक ऐतिहासिक ट्रिबल (ला–लिगा, च्याम्पियन्स लिग र कोपा डेल रे) जितेका वर्षहरुमा मेसी फिफा वर्ष खेलाडीको अवार्डबाट विशुषित भएका थिए। उनले अहिलेसम्म ५ पटक यो अवार्ड जितिसकेका छन्।
तर, बार्सिलोनालाई ऐतिहासिक ट्रिबल जिताउने क्रममा मेसीलाई अन्य धेरै स्टार खेलाडीहरुको साथ थियो। जस्तो कार्लोस पुयोँल, जेरार्ड पिके, आन्द्रेस इनिस्टा, जाभी, डेनी अल्भास, सर्जियो बुसक्वेट, नेयमार, लुईस सुआरेज र अन्य थुप्रै खेलाडीहरु।
जाभी र इनिस्टा आफ्नो स्वर्णीम समय (सन् २००८–०१२) सम्म विश्वकै सर्वोत्कृष्ट मिडफिल्डर थिए। उनीहरुले यो अवधिमा स्पेनलाई २ पटक युरोकप र एकपटक विश्वकप जिताए। बार्सिलोनामा उनीहरुको साथकै कारण मेसीमाथि कम दबाब थियो।
सन् २०१२ मा मेसीले विश्व किर्तिमानी रुपमा एकै वर्ष ९१ गोल गर्नुको पछाडी इनिस्टा र जाभीको साथ नै प्रमुख कारण थियो। यसरी मेसी बार्सिलोनामा सधैं सफल रहे।
अर्जेन्टिनामा भने उनले सफलताको कथा लेख्नै बाँकी छ। सफलताको नजिक पुगेर उनी ४ पटक चुकेका छन्।
सन् २००७ मा अर्जेन्टिना कोपा अमेरिकाको फाइनलमा ब्राजिलसँग पराजित हुँदा मेसी टोलीका वैकल्पिक खेलाडी मात्रै थिए। सन् २०१५ र ०१६ मा लगातार २ संस्करण कोपा अमेरिकाको फाइनलमा चिलीसँग अर्जेन्टिना पराजित हुँदा भने मेसी कप्तान थिए।
उनकै कप्तानीमा अर्जेन्टिना सन् २०१४ को विश्वकपमा फाइनल पुगेर जर्मनीसँग पराजित भएको थियो।
यसरी १ पटक विश्वकप र ३ पटकसम्म कोपा अमेरिकाको फाइनल पुर्‍‍याएर पनि अर्जेन्टिनालाई उनले कुनै उपाधि जिताउन सकेनन्।
मेसीलाई बार्सिलोनामा जस्तो स्टार खेलाडीहरुको साथ नभएका कारण अर्जेन्टिनाबाट उनले प्रमुख उपाधि जित्न नसकेको समर्थकहरुको बुझाई छ। आलोचकहरु स्टार खेलाडीको साथ नपाएसम्म मेसीले केही गर्न नसक्ने आरोप लगाउँछन्। तर मेसीको उत्कृष्ट प्रदर्शनले उनीहरुलाई लगातार जवाफ फर्काइरहेको हुन्छ।
अब फेरि बार्सिलोना फर्कौ‌ ।
यो सिजन पनि मेसी स्टार खेलाडीहरुबाटै घेरिएका छन्। तर उनीहरु पहिलेजस्तै उच्च फर्ममा छन् भन्ने होइन। सन् २०१५ मा जाभीले बार्सिलोना छाडेपछि उनको ठाउँ लिने खेलाडी अझै जन्मिएको छैन।
आद्रेस इनिस्टा बढ्दो उमेरका कारण पहिलेजस्तो फर्ममा छैनन्। नेयमारले टोली छाडेपछि मेसीको काँधमा अझै ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ। नेयमारको ठाउँमा आएका ओस्माने डेम्बेलेको परीक्षा हुन बाँकी नै छ।
बार्सिलोनाले यी र यस्तै कारणले हुनसक्छ आफ्नो पुरानो खेल शैली ‘टिकी–टाका’लाई परिवर्तन गरेर आक्रामक खेल्न थालेको छ। पहिले–पहिले निरन्तर पास खेलेर बल होल्ड गर्दै विपक्षीलाई दबाबमा राख्ने बार्सिलोना अहिले सिधैं विपक्षीको पोस्टमा धावा बोल्छ।
पहिले बललाई मैदानको मध्यभागकै खेलाउन रुचाउने बार्सिलोना अहिले रक्षापंक्तीमा पनि उत्तिकै सजग छ। प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेले अग्रपंक्तीको पूरै भार मेसीमा थोपरेका छन्। लुईस सुआरेजजस्ता विश्वकै खतरनाक स्ट्राइकर समावेश भएको टोलीको अग्रपंक्तीका लिडर मेसी नै हुन्।
उनले गोल गरेर मात्रै पुग्ने छैन। सुआरेज र डेम्बेलेका लागि गोलका अवसर समेत सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यसरी नै पेप गार्डीओलाको अन्तिम सिजन (२०११–०१२) मा बार्सिलोना धेरैजसो मेसीमा निर्भर थियो। नतिजा, त्यस सिजन चिरप्रतिद्वन्द्वी रियल म्याड्रिडलाई बार्सिलोनाले ला–लिगाको उपाधि सुम्पियो।
च्याम्पियन्स लिगमा सेमिफाइनलभन्दा माथिको यात्रा गर्न सकेन। बार्सिलोनाको भागमा घरेलु नकआउट उपाधि ‘कोपा डेल रे’ मात्रै पर्‍‍यो। बार्सिलोनामा जोहान क्रयुफले भित्र्याएको टोटल फुटबलको सिद्धान्तभन्दा यो शैली पृथक छ।
टोटल फुटबलमा कुनै एक व्यक्ति हाबी हुनै सक्दैन। बरु सबै खेलाडीहरुले क्षमता देखाउने बराबर अवसर पाउँछन्। तर यो सिजन बार्सिलोना फरक देखिएको छ। न टोटल फुटबल छ। न ‘टिकी टाका’ नै। बार्सिलोनामा अहिलेसम्म मेसीको जादुमात्रै देखिएको छ।
हरेक खेलमा यस्तै जादु देखिने हो भने अन्य पोजिसनबाट खेल्ने खेलाडीहरुको सिर्जनशिलतामा कमी आउन सक्छ। यस्तो अवस्थाले मेसीमाथि मैदानमा प्रत्येक मिनेट दबाब थोपर्नेछ। खतरा, मेसी तनावमा आउनसक्छन्। सिजनका सबै उपाधि जित्ने बार्सिलोनाको सपना पूरा नहुनसक्छ।
खतरा यो पनि छ, मेसी घाइते भइहालेको खण्डमा वा २–४ म्याच उनीमाथि प्रतिबन्ध लागेमा विपक्षीहरु बार्सिलोनामाथि हाबी हुनसक्छन्। अवसर, मेसीका लागि छ।
उनले ‘आफुलाई विश्व फुटबलकै सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा किन भनियो?’ प्रमाणित गर्न सक्छन्। ‘मेसी अर्कै ग्रहका फुटबलर हुन्’ भन्ने उक्ति (उनीमाथि आर्सनलका प्रशिक्षक आर्सेन विंगरको टिप्पणी) त्यसै आएको होइन भन्ने देखाउन सक्छन्।
मैदानभित्र ‘फ्रि स्पेस’ पाउने बित्तिकै नतिजा उल्ट्याउन सक्ने मेसीले यति गर्न सक्दैनन् भन्ने होइन। अवसर मेसीलाई छ। तर जोखिम बार्सिलोनाले उठाइरहेको छ।
अझै सबैभन्दा धेरै जोखिम प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेको करियरमा हुनेछ। मेसी असफल भएको खण्डमा बार्सिलोना त असफल हुनेछ नै। प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डे समेत असफल प्रशिक्षकका रुपमा दरिनेछन्।
भाल्भर्डेले सफलताका लागि जोखिम मोलेका हुन्। तर यस्तो जोखिम बार्सिलोनाजस्तो प्रतिष्ठित क्लबका लागि सुहाउने विषय होइन। त्यसैले भाल्भार्डेले के सोच्नु राम्रो हुनेछ भने जादुयी क्षमता हुँदाहुँदै पनि मेसीमाथि धेरै दबाब थोपर्नु राम्रो होइन।
कम्तिमा पनि भाल्भार्डेका लागि यति सोच्ने फुर्सद छ किनकी बार्सिलोनाले यस सिजन धेरै खेलहरु खेल्न बाँकी नै छ। तर जर्ज साम्पाओलीका लागि यस्तो फुर्सद कहाँ छ र ?
अर्जेन्टिनाका प्रशिक्षक साम्पाओलीलाई जसरी पनि हतारमा नतिजा निकाल्नु छ। आगामी २ खेलमा अर्जेन्टिना पराजित भयो भने उनको टोली सन् २०१८ मा रसिया हुने विश्वकपमै छनोट नहुनसक्छ। त्यसैले साम्पाओली चुनाैतीले घेरिएका छन्।
बार्सिलोनाको प्रतिद्वन्द्वी क्लब सेभिया छाडेर साम्पाओली यसै वर्षबाट अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक बनेसँगै मेसी उनका प्रमुख खेलाडी रहँदै आएका छन्।
अर्जेन्टिनाले विश्वकप छनोट यात्रामा क्रममा २ पटक प्रशिक्षक फेरिसकेको छ। तर खेलाडी उही पुरानै हुन् किनकी अर्जेन्टिनामा उदयिमान खेलाडीको कमी देखिएको छ।
सर्जियो रोमिरो,जाभियर मास्चिरानो, सर्जियो अगुइरो, गोन्जालो हिगुइन, जाभियर पास्टोरे लगायतका अधिकांश पुरानै खेलाडी टोलीमा छन्। यस्तो अवस्थामा धेरै आशा मेसीबाटै छ।
तर विश्वकपको छनोटमा अर्जेन्टिनाको अवस्था राम्रो छैन। मेसीमाथि अत्याधिक निर्भर भएको यो टिमले १६ खेलबाट केवल २४ अंक जोडेको छ। मेसीले १६ खेलमध्ये ८ खेलमात्रै खेलेका छन्। जसमा अर्जेन्टिनाबाट भएका १० गोलमध्ये ५ गोल गरेका छन्।
उनले खेलेका ८ खेलबाट अर्जेन्टिनाले १७ अंक बटुलेको छ। उनी सहभागि नभएका ८ खेलमा अर्जेन्टिनाले केवल ७ अंक बटुलेको थियो। यही तथ्यले देखाउँछ, अर्जेन्टिना कुन हदसम्म मेसीमा निर्भर छ।
अन्तिम २ खेल खेल्न बाँकी छँदा अर्जेन्टिना पाँचौ स्थानमा छ। पेरु र इक्वेडरसँग अर्जेन्टिनाले खेल्न बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा विश्वकपमा सोझै छनोट हुने हो भने अर्जेन्टिनाले दुबै खेल जित्नुको विकल्प छैन।
दुई खेलमध्ये एक खेल मात्रै जितेको खण्डमा अन्य टोलीको नतिजा कुर्ने वा ‘प्ले अफ’ खेल्दै विश्वकपको यात्रा गर्ने अवस्था आउनसक्छ, नतिजा प्रतिकुल आएमा विश्वकपमा सहभागि हुन नपाउने खतरा पनि उस्तै छ।
१ वर्षअघि मात्रै कोपा अमेरिकाको फाइनलमा पुगेको अर्जेन्टिनाका लागि यो राम्रो संकेत हुँदै होइन किनकी गत संस्करण विश्वकप फाइनलमा पुगेको अर्जेन्टिनाको महत्वाकांक्षा यसपटक उपाधि जित्ने हो। तर अर्जेन्टिनालाई ‘पहिलोे गाँसमा ढुंगा’ परिसकेको छ।
फेरि पनि बिग्रिएको परिस्थिती मिलाउने जिम्मा मेसीकै काँधमा छ। अर्जेन्टिनाले ५ अक्टुबरमा पेरु र १० अक्टुबरमा इक्वेडरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यी खेल जित्दै विश्वकपमा छनोट भएको खण्डमा कम्तिमा पनि केही समयका लागि मेसीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका विषयमा सोच्नुपर्ने छैन।
उनी बार्सिलोनामा केन्द्रित हुन पाउनेछन्। अर्जेन्टिना सोझै छनोट हुन सकेन र ‘प्ले अफ’ खेल्नुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो भने फेरि मेसीमाथि अर्को खेल जिताउनुपर्ने दबाब हुनेछ।
अर्जेन्टिना विश्वकपको छनोटबाटै बाहिरिने संभाव्यताबारे अहिल्यै विश्लेषण नगर्दा राम्रो होला। यस्तो अवस्थामा विश्वकपमा छनोट भएपछि मेसीको व्यस्तता थप बढ्नेछ। बार्सिलोनालाई स्पेनिस ला–लिगा, च्याम्पियन्स लिग र कोपा डेल रे जिताउने अभियानको समाप्ती (सफल वा असफल) पछि उनी विश्वकपको तयारीमा लाग्नुपर्नेछ।
मेसी लिडर हुन्। टोलीका मियो हुन् किनकी मेसी अर्जेन्टिनाका लागि कुद्छन्। समर्थकहरु उनीसँगै आफ्नो देशको सफलता कुरेर बस्छन्।